लाइक र रिएक्सन देखाउन किन बन्द गर्दैछ फेसबुक ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
लाइक र रिएक्सन देखाउन किन बन्द गर्दैछ फेसबुक ?
जेन्सी / फेसबुकले कुनै पनि पोष्टको लाइक एवं रिक्सेनको गणना नदेखाउने तयारी थालेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएअनुसार फेसबुले अष्ट्रेलियाबाट यसको सूरुवात गर्ने तयारी गरेको हो । मानिसहरुले कुनै पनि पोष्टमा भएका लाइक एवं रिक्सेनको गणनाअनुसार त्यो पोष्टलाई मान्यता दिने गररेको देखिएका कारण फेसबुकले यस्तो तयारी थालेको समेत जानाइएको छ ।